Dacwadda Al Bashiir: Madaxweynihii hore ee Suudaan "oo malaayin doolar ka helay Sucuudiga" - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDacwadda Al Bashiir: Madaxweynihii hore ee Suudaan “oo malaayin doolar ka helay Sucuudiga”
Khartuum (JigjigaOnline) – Madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar Al Bashiir ayaa maanta la hor geeyey maxkamadda ku taalla magaalada Khartuum si loo dhageysto dacwadda musuq maasuq ee loo heysto.
Ciidamada ammaanka ayaa si aad ah u adkeeyey ammaanka maxkamadda iyo agagaarkeeda ka hor intii aan Cumar Xasan Al-Bashiir lasoo gaadhsiinin maxkamadda, waxaana halkaas looga akhriyey dacwadaha loo haysto oo uu ugu horreeyey kiis musuqmaasuq oo ah lacago uu ka helay dalal shisheeye iyo hanti qaranku lahaa oo uu gurigiisa ku xaraystay.
Al Bashiir ayaa qirtay in lacago malaayin ah ay usoo dirtay dowladda Sucuudiga, sida mid kamid ah baarayaasha uu maanta maxkamadda ka sheegay xilli ay socotay dhageysiga dacwadda loo heysto Al Bashiir.
“Ninkan lasoo eedeeyay waxaa uu inoo sheegay in 25 milyan doolar uu usoo diray dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan si uu lacagtaas ugu adeegsado arrimo ka baxsan miisaaniyadda dowladda” ayuu yidhi Axmed Cali oo ka tirsan baadhayaasha oo wareysi siinayay wakalaadda wararka ee AFP.
Sida laga soo xigtay Al bashiir, Axmed Cali waxaa uu sheegay in ay hore u jireen lacago kale oo gaadhaya 35 milyan oo doolar iyo 30 milyan oo doolar looga soo diray dhinaca Sucuudiga.
Madaxweynihii hore ee Suudaan ayaa loo haysta dacwado musuqmaasuq iyo inuu si sharci darro ah u heystay lacago qalaad.